HC-MDH2 Camcorder - Video Recorder - Panasonic
ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ရုပ်ပုံအရည်အသွေးဖြင့် ရိုက်ကူးရေးစနစ်
သင့်အနေဖြင့် တစ်သက်တွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာရှိသော အခိုက်အတန့်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖန်တီးပေးသည့် Pro-Style ပခုံးတင် လက်ဆွဲတီဗွီကင်မရာတွင် လိုသလိုရိုက်ကူးခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် ပေါင်းထည့်ထားသော အနေအထားနှင့် 5-Axis Hybrid O.I.S. + နှင့် မျက်နှာပြင်ညီအောင် ချိန်ညှိရိုက်ကူးခြင်းတို့အတွက် တပြိုင်တည်း ရုပ်သံဖမ်းယူနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်ပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အားထားရမှုတို့အတွက် မှတ်သားနိုင်သည့်ကိရိယာနှစ်ခုစလုံးထဲတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရုပ်သံဖမ်းယူပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ထပ်ဆင့်ရုပ်သံဖမ်းစနစ်သည် ဆက်လက်ရုပ်သံဖမ်းယူခြင်းအတွက် သင့်တော်မှုရှိပြီး မှတ်သားနိုင်သည့် ကိရိယာ ၂ ခုအကြား ကူးပြောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
-ကိရိယာတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းနေချိန်အတွင်းတွင် အသံသည် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် မပါဝင်ပါသည်။
-တဆက်တည်းရုပ်သံဖမ်းယူခြင်းကို နှောင့်နှေး ရုပ်သံဖမ်းယူနေစဉ်အတွင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Dual Memory တွင် တပြိုင်နက်တည်း/ထပ်ဆင့် ရုပ်သံဖမ်းယူခြင်း
ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့်Pro-Style ဒီဇိုင်း
ပွိုင့် ၄ ခုဖြင့် တည်ငြိမ်မှုရှိစေပြီး သက်သောင့်သက်သာ ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။ LCD ထိတွေ့ပန်နယ်နှင့် မျက်လုံးအနေအထားအကြားတွင် အကွာအဝေး အလွန်များပါသည်။ အတည်ပြုရလဒ်များအရ ၂၀၀ မီလီမီတာသည် အသင့်လျော်ဆုံးသော အကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်။ LCD မော်နီတာ၏ အနေအထားသည် မျက်လုံးနှင့် တစ်တန်းတည်းနီးပါးတွင် ရှိနေပါသည်။၎င်းသည် LCD အခြေပြုရိုက်ကူးခြင်း ပုံစံအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ ညာဘက်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ရှေ့ကြည့်မြင်ကွင်းရှိပါသည်။
5-Axis HYBRID O.I.S. + မျက်နှာပြင်ချိန်ညှိရိုက်ကူးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်
5-Axis HYBRID O.I.S. + သည် ရှုထောင့်အကျယ်မှ မြင်ကွင်းရိုက်ချက်များအထိ တလျှောက်လုံး ပုံရိပ်မှုန်ဝါးခြင်းများကုဖယ်ရှားပေးပြီး မည်သည့် ရိုက်ကူးရေးအခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ရုပ်ပုံများကို ဖမ်းယူရရှိနိုင်စေပါသည်။
မျက်နှာပြင် ချိန်ညှိရိုက်ကူးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုက်ယူမည့်ပုံများ ရွဲ့စောင်းနေပါက အလိုအလျောက် ရှာဖွေ၍ အမှန်ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်မှုမရှိသောအနေအထားတွင် ရိုက်ကူးသည့်တိုင် သို့မဟုတ် သုံးချောင်းထောက်မပါဘဲနှင့် အလျားလိုက်ပုံများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်စေပါသည်။
၂၈ မီလီမီတာ ရှုထောင့်အကျယ်နှင့် ၅၀ ဆအထိချဲ့နိုင်သော မြင်ကွင်း
၂၈ မီလီမီတာ ရှုထောင့်အကျယ်မှ ၅၀ ဆအထိ မြင်ကွင်းချဲ့နိုင်သည့် မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ကူးစနစ်သည် ဓာတ်ပုံထဲရှိ ဖော်ပြချက်၏ အကျယ်ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ပေးပါသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် အကွာအဝေးတစ်ခုရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ ဆန်းကျယ်သော ပုံရိပ်များကို ရယူခြင်းအတွက် မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းမှ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပုံရိပ်များအထိ အရာအားလုံးကို ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။
လက်ကိုင်ကွင်းနှင့် လွယ်ကူသည့် ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဆက်တင်များ
ဆုံချက်/ မြင်ကွင်း/အိုင်းရစ်/အဖြူရောင်မျှခြေ/ရှတ္တာနှုန်း - လက်ကိုင်ကွင်းဖြင့် ထိန်းညှိရန်အတွက် ဆက်တင်များကို ရွေးချယ်ရန် ရိုးရှင်းစွာပင် ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ကွင်း၏ အနေအထားနှင့် အချင်းကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပုံစံဖော်ထားပါသည်။ ဥပမာ- လှည့်သော အခါ ကွင်း၏ အလေးချိန်က ကောင်းမွန်သည့် ချိန်ညှိမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေပါသည်
Crystal Engine Pro သည် ကြည်လင်ပြတ်သားသော HD အပြည့်ပုံများ ရရှိစေသည့် ဒေတာများစွာကို ချက်ချင်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးပြီး HD အပြည့် အရည်အသွေးကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ မြင်ကွင်းအတိုင်းအတာသည် မြင်ကွင်းချဲ့ခြင်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်နေသည့်တိုင် ချောမောပြေပြစ်သော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးမြင့်သည့် မြင်ကွင်းရိုက်ချက်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ Crystal Engine Pro သည် သင်ရိုက်ကူးလိုသောအရာ၏ အသေးငယ်ဆုံးသော အသေးစိတ်များကိုပင် အလွန်သဘာဝကျသော အလှအပနှင့် ရှင်းလင်းစွာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။
အဆင့်မြင့် အာရုံခံ Sensor အသစ်
နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ထားသည့် အဆင့်မြင့် အာရုံခံ Sensor နှင့် Crystal Engine PRO တို့ပေါင်းစပ်မှုသည် ၎င်း၏ အသာလွန်ဆုံးဖြစ်သော အစက်အပြောက်လျော့ချမှုလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အလင်းတောက်ပသော အနေအထားနှင့် မှိန်သော အနေအထားနှစ်ခုလုံးတွင် တောက်ပသော၊ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး အစက်အပြောက်နည်းသော ရုပ်ပုံများကို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးပါသည်။ လှပသော ရုပ်ပုံများကို အခန်းတွင်းတွင်သာမက ညဘက်အခြေအနေများတွင်ပါ အခြေအနေအမျိူးမျိူးအောက်တွင် မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
၁၀၈၀ တီဗွီ လိုင်းများဆိုင်ရာ အလျားလိုက် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး
၁၀၈၀ တီဗွီလိုင်းများ၏ အလျားလိုက် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး*သည် အလွန်သေးငယ်သော အသေးစိတ်များကိုပါ ဖော်ပြသည့် HD အပြည့် ကြည်လင်သည့် ရုပ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
*JEITA ITE ဇယားနှင့် CIPA (ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာများအတွက်) ISO1233 ရုပ်ထွက်ပြ ဇယားတို့ အရ။
၂၀.၄ megapixel ရုပ်ပုံများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးတွင် ၂၀.၄ megapixel များဖြင့် ပုံများသည် အလွန်လှပစွာထွက်ရှိပါသည်။
*၁၆း၉ အချိူးအဆဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရုပ်ပုံများအတွက်။
iA (intelligent Auto) / iA Plus မုဒ်
၎င်း၏ စွမ်းအားကောင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုက်ကူးရေးအနေအထားများကို ချိန်ညှိပေးပြီး ဆက်တင်များကို အလိုလျောက် ပြုလုပ်ပေးပြီး အကောင်းဆုံးသော ရလဒ်များကို ဖန်တီးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသက်သွင်းပါသည်။ ထို့အပြင်၊ iA Plus မုဒ်သည် LCD ပေါ်မှ ခလုတ်ကို ဖိရုံဖြင့် အလင်းရောင်နှင့်ထိတွေ့မှု အစားပေးခြင်နှင့် အဖြူရောင်ညီမျှမှုတို့ကို ထိန်းညှိနိုင်စေပါသည်။
၃.၀ လက်မအကျယ်ရှိသည့် ထိတွေ့စနစ်ပါသော LCD
ကြည့်ရှုရလွယ်ကူသော ၇.၅ စင်တီမီတာ/ ၃.၀ လက်မ အကျယ် LCD စခရင်တွင် လက်ချောင်းများဖြင့် ထိလိုက်ရုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည် LCD စခရင်ပေါ်သို့ ကြည့်စရာမလိုဘဲ ချောမွေ့သော ခံစားမှုဖြင့်သိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်သည့် LED ကွင်း
အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်သည့် LED ကွင်းကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ရိုက်ကူးမှုကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းရှိမရှိ အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ရိုက်ကူးမှုကို ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့စေပါသည်။ အလင်းရောင်ကို ပိတ်နိုင်/ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
အဓိက အလုပ်လုပ်ဆောင်သည့် ခလုတ်များကို အတူတကွအုပ်စုဖွဲ့ထားပါသည်
မမှန်ကန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို လျှော့ချရန် ဖော်ပြပါခလုတ်များကို အတူတကွ စုစည်းထားပါသည်။ Mode switch, Intelligent auto / Manual / Manual focus switch, Cursor button,Optical Image Stabilizer button, Menu button
ဘတ်ထရီနှင့် ဂျက်ပင်ပေါက်များသည် အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်
ဘတ်ထရီသည် အလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်ရန်နှင့် အကောင်းဆုံးသော အလေးချိန်ညီမျှမှုအတွက်အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ထားရှိပါသည်။
ထို့နည်းတူစွာ အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသော ဂျက်ပင်ပေါက်များကြောင့် ကြိုးများနှင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
ပလက်ထိုးပြီး ပြင်ပ HDD သို့ ကူးယူနိုင်သည်။
နာရီပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးထားသည့် ရုပ်ပုံဒေတာတို့ကို ရိုက်ကွင်းနေရာ၌ပင် သယ်ရလွယ်ကူသော ပြင်ပ HDD ထဲသို့လွယ်ကူစွာ အရန်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
AC adaptor နှင့် ချိတ်ဆက်မထားပါက ပြင်ပကိရိယာကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
Eye-Fi™ ကဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် PC မှ ကတ်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ (သို့) ၎င်းတို့ကို ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုမှ တဆင့် SNS သို့ တင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင့်စက်ပစ္စည်း (စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် စသည်) တို့သို့လည်း တိုက်ရိုက် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
*Eye-Fi™ ကတ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ (ကြိုးမဲ့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအပါအဝင်) သည် ဤထုတ်ကုန်တွင်အလုပ်လုပ်မည်ဟု အာမခံချက်မထားပါ။ ကတ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ချွတ်ယွင်းပါက ကတ်ထုတ်လုပ်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
*Eye-Fi™ ကတ်ကို အသုံးပြုရန်၊ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရဆီမှ ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။ အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိခြင်း ရှိ/မရှိ မသေချာပါက ကတ်ထုတ်လုပ်သူထံ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါ။
*Eye-Fi™ ကတ်ဖြင့်အတူ ပေးထားသော ဆော့ဖ်ဝဲကို သင့် PC တွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းပြီး Eye-Fi™ ဆက်တင်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။ (ဆက်တင်များသတ်မှတ်ရန်၊ ကတ်၏ ညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ပါ သို့မဟုတ် ကတ်ထုတ်လုပ်သူထံမှ အကြံဥာဏ်ရယူပါ။)
Panasonic Full-HD Camcorder HC-MDH2 ဗီဒီယို မိတ်ဆက်
pro-style ပခုံးတင် HD camcorder တွင် တပြိုင်နက်တည်း ထပ်ဆင့်ရုပ်သံဖမ်းယူစနစ်ပါဝင်ပြီး 5-Axis Hybrid O.I.S.+ & Level Shot လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် 50x optical zoom တပ်ဆင်ပါရှိသည်။